သူတို့လေးတွေဘ၀များ သာယာပါစေ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » သူတို့လေးတွေဘ၀များ သာယာပါစေ။	14
Posted by အာဂ on Dec 24, 2014 in Arts & Humanities | 14 comments
ကျွန်တော်ပုဂံသွားတုန်းက သရပါ3စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ဒီကလေး ၂ယောက် လမ်းဘေးမှာထမင်းစားနေတာမြင်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီး ။ သူတို့ ဘ၀လေးတွေအကြောင်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့က ညီအစ်ကို တွေပါတဲ့ ကျောင်းလည်း တက်နေပါသတဲ့။ တစ်ယောက်က ၄တန်း။ တစ်ယောက်က ၅တန်းတဲ့ ။ အခုကျောင်းပိတ်လို့လာတောင်းနေတာပါတဲ့။ ရင်ထဲ ဆို့ တက်မိသွားတယ်။ သူတို့လိမ်နေတာများလို့တွေးလည်းတွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ သေချာ စိစစ်မေးမြန်းကြည့်တို့ သူတို့မလိမ်ဘူး။ရိုးသားတာသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ကျောင်းမှာ အဆင့်တွေလည်း အဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။ တစ်ယောက် က အဆင့် ၅ ။တစ်ယောက် ကအဆင့် ၁၀ လောက်ရှိတယ်။ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့ကိုများ ဖေးဖေးမမနဲ့ သေချာပညာရေးလိုက်စားခိုင်း ရင် ဒီထက် အဆင့်တွေရမယ်နောင် သူတို့ဘ၀ကောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲကပေ့ါ။အခု စားနေတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေကရောဘယ်ကရလဲဆိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက နေယူလာ တာတဲ့ သူတို့အောက်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဖေကတော့မရှိတော့ဘူးဆိုလား။ ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလားပဲ။ ထူးခြားတာက သူတို့က ရန်ကုန်က သူတောင်းစား တွေလို ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်မတောင်းဘူး။ဘေးနားကဖြတ်လျောက်တဲ့ လူတွေကိုလည်း သနားပါခင်ဗျာဆိုပြီးမတောင်းဘူး။ သူတို့ခွက်လေးချထားတယ်။ စေတနာရှိရင်ထည့်လှူဆိုတဲ့ သဘောမျိုး။ဒီတော့ ကိုယ်လည်း အားပေးရတယ်။ ညီလေးတို့ကို အစ်ကို ပိုက်ဆံတော့မလှူဘူး။ ကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ စာရေးကိရိယာတွေပေးမယ်ရ လား ဆိုတော့ သူတို့လက်ခံတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုလိုက်ပို့တဲ့လူကို ကိုယ့်တက်နိုင်သမျှလေးပေးပြီးတော့ စာအုပ်၊ခဲတံ၊ခဲဖျက်တွေဝယ်ခိုင်းပြီးသူတို့ကိုလှူ ခဲ့ မိတယ်။သူတို့ညီအစ်ကိုလည်း လိုလိုချင်ချင်နဲ့ယူခဲ့တယ်။ အရမ်းလည်းကျေနပ်မိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါလေးက တော့ သွားဖူးသမျှခရီးတွေထဲမှာမှ အမှတ်တရလေးပါပဲ။ နောက်ဆုံး တွေးမိတာကတော့ ဆရာတာရာမင်းဝေ အတွေးထဲ ကလို သူတို့ လေးတွေက တောင်းစားတာမှန်တယ်။ ပညာလည်းသင်နေတယ်။ သို့သော် ခိုးယူ၊ဓားပြတိုက်မစားမစားဘူးလုမစားဘူး။ ရိုးသားတယ်ဆိုတာပါပဲ။သူတို့ညီအစ်ကို ၂ယောက်ဘ၀ တိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းလျက်။
kai says: ကိုရင့်လိုလူတွေများလာရင်.. တိုင်းပြည်အနာဂတ်တွေအတွက်.. နည်းနည်းတော့ စိတ်ချမိမှာ…။
“ငါ့လက်ကလွတ်ဗြွတ်..” အလှူမဟုတ်လို့.. သာဓုကြီးကြီး.. တခု…။
ဒီချာတိတ်ကလေးတွေ.. ပုဂံလိုနေရာမှာ.. လာလည်တဲ့တိုးရစ်တွေကို.. နတ်လမ်းညွှန်.. အကူအညီပေးယုံနဲ့.. ငွေရတဲ့.. ပညာရတဲ့.. ဘ၀တက်လမ်းရှိတာကို.. ဘာလို့တောင်းစားသလည်းတော့.. တွေးမရ..။
မြစပဲရိုး says: အုပ်ချုပ်သူတွေ ကိုယ်တိုင် တောင်းစား နေကြ တဲ့ နိုင်ငံမှာ
ဒီလို ကလေး တွေ တောင်းစား နေကြတာ ဆန်းလို့လား သူကြီးမင်းရယ်။
တိုင်းပြည်ထဲ သံယံဇာတ တွေ ရေမြေ သဘာဝ ကောင်း တွေ ရှိတာကို
ဘာလို့တောင်းစားသလည်းတော့.. တွေးမရ..။ အရီး တို့ မင်းသားက မိုက်သကွယ်။
မင်းသမီး တစ်ပင်ထဲ လေးရော မပါဘူးလား။
kyeemite says: .အဲ့အရွယ်ကလေးတွေ ပုဂံဘုရားမှာ ဧည့်သည်တွေနားကပ်ခွင့်မရတော့ဘူးဗျ..သဂျီးရ
.နိုင်ငံခြားသားနားကပ်ဖို့ဆို ပိုဝေးသေး….. .ကိုရင်အာဂရဲ့ စေတနာမှန်လေးကိုလေးစားပါတယ်..သာဓုပါဗျို့
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ရွှေပြောင်ပြောင် စေတီတွေကို ရွှေထပ် ကပ်ရတာထက်
ဒီလို ကလေးတွေရဲ့ ဘဝတစ်ထောင့်တစ်နေရာကို ကူညီရတာ ပို သဘောကျမိတယ်ဗျာ။
အဲ့လို ကလေးတွေ . . .တွေ့ရင် . . .
အသက်ကြီးကြီး တုန်တုန်ချိချိ အဖိုးအဖွားတွေ တောင်းစားနေရတာ မြင်ရင်
ကျနော် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ ခွန်အား သတ္တိနဲ့ အစွမ်းအစ . . .
ကျနော် မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကို ဒီအတိုင်း လျစ်လျူရှုထားနိုင်တဲ့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့. . .
အဲ့ဒီ အရာနှစ်မျိုးကို ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ပညာ
ကျနော့်အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်တယ်။
ခင်ဇော် says: Agree..!!
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
aye.kk says: အာဂ
မရှိဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ
ကရုဏာ ထားတတ်တဲ့၊စိတ်ကို လေးစားမိတယ် ။ မွန်မြတ်တဲ့အတွက်
padonmar says: ဒို့ရွာသားကွ
Ma Ma says: ကောင်းလိုက်တဲ့ အလှူ ပဲ။
အကြံဥာဏ်လည်း ကောင်း၊ စေတနာလည်း ကောင်း။
သာဓု သာဓု သာဓု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုအာဂရေ….
တကယ်လိုတဲ့နေရာမှာ … အလှူပေးခဲ့တာလေး…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: သာဓုပါ ဆရာကြီးရေ… ဒါတွေက မေးဖြစ်မှ သိရတာ.. သာမန်ဆို ကောက်ချက်လွယ်လွယ်ချမိကြမှာ… အဲလိုဘ၀တွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိနေပြီလဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: အလှုပြုတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလေးအတွက်တော့ ကိုအာဂကို ချီးမွှမ်းမိတယ်ဗျ။
အဲလိုကလေးအရွယ်လေးတွေဘဲ ပုဂံဘုရားဖူးသွားတုန်းက ဘုရားတစ်ခုဝင်မိရင် ” ဦးလေးကြီး ဘုရားသမိုင်းပြောပြရမလား မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုရော ပြောပြပေးမယ် ဦးလေးကြီးတို့စေတနာရှိသလောက်ပေးပါ၊ မပေးလည်းလိုက်ပြောပေးမယ်လေ” ဆိုပြီး အနားကပ်လာပြောတဲ့ ကလေးတွေ ဘုရားတိုင်းမှာတွေ့ရတယ် ငွေတောင်းနည်းတစ်ခုဆိုပေမယ့် သူ့လုပ်အားနဲ့သူတို့နိုင်သလောက်လုပ်ပြီးငွေတောင်းတာမို့ ပြောခိုင်းပြီး မုန့်ဖိုးပေးတတ်ကြပါတယ်။
သူ့အရပ် သူ့ဇာတ်နဲ့တော့ ဟုတ်လို့ပါဘဲ။
uncle gyi says: ဒီတခါသူကြီးကစံနစ်ကြောင့်လို့မပြောတာဆန်းတယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . အထက်က ကောင်းကင်ပြာလိုပဲ။ သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုအာဂနဲ့ မနွယ်ပင်ရေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 362
Paing Lay says: သာဓုပါ……….ကိုအာဂရေ……..ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ……….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.